သိင်္ဂီနွယ်ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်: ဆရာမ နုနုရည် ( အင်းဝ ) ရဲ. နတ်ချော့သူ...
ဆရာမ နုနုရည် ( အင်းဝ ) ရဲ. နတ်ချော့သူ...
ဆရာမနုနုရည် (အင်းဝ) ရဲ့ နတ်ချော့သူ ၀တ္ထုတိုလေးတင်လိုက်ပါတယ်။ ကျမကတော့ ဒီဝတ္ထုတိုလေးနောက် ဆရာမရဲ့ အရေးအသားနောက် မျှောပြီး လိုက်သွားလိုက်တာ.... တော်တော်ကို မောသွားရပါတယ်။ ဟင်း....။ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦးနော်...။
natchawtthu_NNYinnwa - UploadaDocument to Scribd
Posted by tg.nwai at 11:14:00 PM
Lables, ၀တ္ထုတို၊ (မြန်မာ)
ဒီလို ၀တ္ထုတိုလေးတွေတင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါရှင့်
ကျွန်မအဖေက သဘောင်္သားလေး ဟီးဟီး